.: ကောင်းခြင်း ၅ ဖြာရှိယုံနဲ့ တော့
ကောင်းခြင်း ၅ ဖြာရှိယုံနဲ့ တော့
ကြားဖူးတာ တခုရှိတယ်ရှင့်...မိန်းခလေးတယော က် က ကောင်းခြင်း ၅ ဖြာနဲ့ ပြည့်စုံရင် မိန်းမပီသတယ်လို့ ပြောကြတယ်..။ မှန်သင့်သလောက်တော့ မှန်ပါတယ်...ဒါပေမဲ့ အပြည့်အ၀တော့ လက်မခံချင်ဘူး..။ ကောင်းခြင်း ငါးဖြာဆိုတာက...
တွေရယ်ပါ....။အဲကောင်းခြင်းတွေ ရှိမှ သာ မိန်းမပီသတယ်လို့ ရှေးလူကြီးတွေက ယူဆကြတယ်...။
အဲတွေကောင်းယုံနဲ့ မိန်းခလေး တယောက်က ပြီးပြည့်စုံသွားပြီတဲ့လား ..? မိန်းမကောင်း တယောက်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေက အများကြီးရှိနေပါတယ်...။ လောကမှာ ရုပ်အင်္ဂါ ချောမောလှပယုံနဲ့အရာရာ မပြည့်စုံနိုင်ပါဘူး..။ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းခြင်း ဆိုတာကလည်း အရမ်းပဲအရေးပါ ပါတယ်....။
ဥပမာ...ကြတ်ဥ တလုံးက အကာပဲကောင်းပြီး...အနှစ် မကောင်းရင် မရသလို ...ထို့ အတူပါပဲ
အနှစ်ပဲ ကောင်းပြီး အကာ မကောင်းရင်လည်း ကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ မရသေးဘူးထင်တယ်...။အသားအရ ည်တွေ အရိုးတွေ အရွယ်တွေ ကောင်းပြီး စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်း မရှိရင် ဘာလုပ်မလဲ။ ရုပ်ရည်မှာ ပြီးပြည့်စုံအောင် လှပြီး စိတ်ထား မကောင်းတာထက်စာ ရင် ရုပ်ရည်မှာ ပြီးပြည့်စုံအောင်မလှပေမဲ့ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိ တဲ့ မိန်းခလေးက ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်... .။
ဖြူစင်တဲ့ စိတ်ထားလေးတွေနဲ့ အတူ တန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းခလေးများဖြစ်နိုင်ပါစေ
Post By ငှက်ငယ်လေး at 9:32 AM
Labels: မိန်းမတို့ ဣနြေ္ဒ ရွှေပေး၍ မရ
4 ယောက်က ဒီလိုလေးတွေပြောသွားကြပြီ:
အရေးကြီးဆုံးက စိတ် တစ်ခုတည်းပါ
ငှက်ပေါက်စ လေး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုရင် သံသရာ ကို လက်ခံမှာပါ ..
ခန္တာကိုယ် ဆိုတာက ဒီဘ၀ ပြီးရင် စွန့်ပစ်ထားခဲ့ရမယ့် အရေခွံလေး တစ်ခုသက်သက်ပါ ...
အရေခွံလေးကို သနေလို့လည်း သေရင်တော့ စွန့်ခဲ့ရမှာပါပဲ ..
အဲ့ဒါကြောင့် ယခု အခြေအနေရော သံသရာ တစ်လျှောက်လုံး အတွက်ပါ စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်းလေးကသာ အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါကြောင်း ထောက်ခံပါတယ်ခင်ဗျ ..
ဒါနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထင်လို့ ပြောလိုက်မိတာနော် မဟုတ်ရင်တော့ စောတီ; ဘွာတေးပေါ့ဗျာ :)
ကျွန်တော်အပေါ် နားလည်ပေးနိုင်ရင် လုံလောက်ပြီ (အဟီး)
မိန်းခလေးအလှက ကြက်ဥနဲ့လည်း တူသေးသကိုး။
ဟုတ်တယ်ဗျာ ဒီကောင်းခြင်းငါးဖြာနဲ့ မပြီးသေးဘူးဗျ။ အဲဒါတွေတော့ ကောင်းပါရဲ့
ချစ်သူနဲ့ ချိန်းတွေ့ချိန် အီးထုခြင်း၊ စတဲ့ဟာတွေရှိ
ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဟုတ်ဘူးလား။ တော်ကြာ
ကျနော်နဲ့ ကြိုက်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးလို အီးထုရင်
ဟဟ..ဆိုးလိုက်တဲ့ အိမ်..း)
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်ကောင်းလေးတစ်ခုပါ ညီမလေးရေ။
February 20, 2009 at 5:03 AM
ငှက်ငယ်လေးရဲ့ ဘလော့မှ ကြိုဆိုပါတယ်ရှင်
မိန်းမတို့ ဣနြေ္ဒ ရွှေပေး၍ မရ (3)
အချစ်နဲ့ ဘ၀ (3)
မြန်မာပြည်သို့ အလွမ်း (3)
သူရေးတဲ့ ကဗျာများ (2)
Template နဲ့ ပါတ်သတ်လို့(1)
မိန်းကလေးများ နှင့် အလှတရား (1)
မှတ်သားဖွယ်ရာ ဘာသာတရား (1)
နာတိရယ်နော် :P ....................................... ... ...
(မ)၀ါဝါခိုင်မင်း (မ)သဉ္ဇာ (မ)ဆုမွန် (မ) မေရဲ့ စိတ်ဖြေရာ(မ) လိပ်ပြာလေး (မ) ပုလဲ(မ) Dream(ကို)နွေဆူးလင်္ကာ (ကို)အောင်ဦး (ကို)ရဲရင့်ငယ် (ကို)ရန်ကုန်သား (ကို)ဂျူဝသန် (ကို)ခပ်ပိန်းပိန်းကောင်လေး jeljel) (ကို)Canadamyanmar (ကို) ၀င်းဇော် (ကို) နေမုန်း (ကို) အိမ်မက်ရှင် (ကို) အလှတရား (ကို) အညတြ(ကို) သီဟညိမ်း (ကို) ရဲဝင့်သူ (ကို) ရဲရင့်သက်ဇွဲ (ကို) ရဲရင့်နီ (ကို) မိုးသောက် (ကို) ဗီလိန် (ကို) တက်လူငယ် ကို) ဇီးကုန်းသာယာ (ကို) ဇင်ယော် (ကို) ချစ်ခြင်းခြေရာ (ကို) ကိုကျော်ထက်လတ် (Republic) (ကို) MTZO ရဲ Creative Space (ကို) idulize (ကို) Dr. Nyan သစ်ပင်တစ်ပင်